तुल्सीदास महर्जन | Ratopati
बुधबार १९ मङ्सिर, २०७५ Friday, 17 September, 2021
रुपा–सरस्वती विवाद : न उछाल्न मिल्छ, न अनदेखा नै access_timeअसार १४, २०७८
सरस्वती–रुपा विवाद प्रकरण न उछाल्न मिल्ने न त अनदेखा गर्न मिल्ने घटना हो । यो घटना सरस्वती प्रधान काठमाडौँका नेवार र रुपा सुनार काठमाडौँ बाहिरका गैरनेवार दलित भएर भएको होइन । यस्तो घटना काठमाडौँ बाहिरबाट आएका गैरदलित नेवार र काठमाडौँ भित्रका दलित...
विज्ञानलाई बोक्दा चर्चद्वारा औधी सताइएका वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिली access_timeअसोज ४, २०७७
के ईश्वरले गल्ती गर्छन् ?” “अहँ, गर्दैनन् ।” “बाइबलले झूठ बोल्छ ?” “ओहो ! त्यस्तो पनि हुन्छ र ? बाइबलले झूठ बोल्नै सक्दैन ।” “अनि, बाइबलले स्वीकारेको झूठ सत्य हुन्...
जीन बाप्टिस्ट लेमार्क : जसले बिकासवादी सिद्धान्तको जग हाले access_timeसाउन २९, २०७७
Title Photo: https://todayinsci.com ‘सर ! हिँड्न नै अप्ठेरो हुनेगरी कछुवाको शरीरमा कडा खोल किन भएको हँ ? त्यो कहिल्यै हट्दैन र ? कछुवाको पनि खरायोको जस्तै बलियो र छिटो छिटो चल्ने खुट्टा हुने र जीउमा कडा खोल नहुने हो भने त्यो पनि त ...
कोरोना महाव्याधि डढेलोझैँ झनै सल्कँदै : कहिले बन्ला औषधी र भ्याक्सिन ? access_timeबैशाख १६, २०७७
कोरोना कहरको भयावहता अझै सकिएको छैन । यो महामारी डढेलोझैँ झनै सल्कँदै गइरहेको छ । भयावह स्थितिको अन्त्यका लागि कोहीकोही ईश्वर अर्थात् भगवान, परमेश्वर, अल्लाह, गड आदि उपमाले चिनिने आफ्ना आस्थाका अलौकिक शक्तिहरुलाई गुहारिरहेका देखिन्छन् । तर, ईश्वर रहने भनी सर्वसाधारणले...
सामाजिक दूरी, नमस्ते र छाउपडीबारे केही कुरा access_timeबैशाख ३, २०७७
अहिले कोरोनाका कारण पहिलो वहस सामाजिक दूरीबारे भयो भने दोश्रो नमस्ते सँस्कृतिबारे । यही क्रममा छुवाछुत र छाउपडीबारे पनि केही मानिसहरुले ती व्यवहारहरु वैज्ञानिक भएको तर्क गरेका छन् । यसबारेमा अलि सोच्नुपर्ने भएको छ । पश्चिमाहरुका लागि जहाँ जातपातका आध...
विश्वलाई आतङ्कित बनाइरहेकाे कोरोनाभाइरसले संक्रमण कसरी गर्छ ? access_timeचैत २१, २०७६
अहिले पूरै विश्व कोरोनाको संत्रासमा छ । किनकि, विश्वमा भएका सबै २ सय ३ वटा मुलुक तथा शासित क्षेत्रहरुमा कोरोना भाइरस फैलिसकेको छ । यसको अर्थ पूरै पृथ्वी अहिले कोरोनाको आक्रमण वा शासनमा छ । यो लेख प्रकाशित हुँदासम्म (चैत्र २१ बिहान १०:१० बजे) विश्वभर १० लाख १...
विज्ञानको आँखाबाट नियाल्दा यस्तो पो रहेछ कोरोनाभाइरसको नालीबेली ! access_timeचैत १७, २०७६
ओहो ! आजको मितिसम्ममा विश्वमा कोरोनाबाट संक्रमितको सङ्ख्या झण्डै ७ लाख पुग्न लागिसक्यो । हताहती पनि अब ३० हजार नाघिसक्यो । नेपालमा अहिलेसम्म कसैको पनि हताहती नभए पनि ५ जना बिदेशबाट फर्किएका नेपालीहरु संक्रमित भएकाले कहिँ चीन, युरोप र अमेरिकामा जस्तै निकट दिनहरुमा न...
विश्वव्यापी महामारीमा कोरोना पहिलो होइन access_timeचैत १२, २०७६
कोरोनाको कारण आजको मितिसम्म विश्वभरमा झण्डै २० हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने संक्रमितको सङ्ख्या ४ लाख पुग्न लागिसकेको छ । अहिले विश्वभरका १ सय ९४ देशमा कोरोना भाइरसले प्रवेश पाइसकेको छ । त्यसैले आम रुपमा फैलिन नदिनका लागि मुलुकहरुले आआफ्नो देशलाई पूरै लकडाउन गर्ने...
प्राकृतिक छनौटबाट कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) access_timeचैत ८, २०७६
अहिले विश्व कोरोनाभाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ । गत डिसेम्बरमा चीनको उहानबाट सुरु भएको कोभिड–१९ नामको भाइरसका कारण आजको मितिसम्ममा विश्वका २ लाखभन्दा बढी मानिसहरु संक्रमित भइसकेका छन् भने ९ हजारभन्दा ज्यादाको मृत्यु भइसकेको छ । चीनमा ३ हजारभन्दा बढी...
सौर्यमण्डलका माउतारा सूर्यबारे केही जानकारी access_timeमाघ १, २०७६
सूर्य कति ठूलो ? कति तातो ? हाम्रो ब्रम्हाण्ड अर्थात् आकाशगंगा तारापुञ्जका करिब एक खर्ब पचास अर्ब संख्याका ताराहरुमा सूर्य पनि एक तारा हो । सूर्य एक मझौलाखाले तारा हो । तर यो हामीबाट धेरै नजिक भएको कारणले गर्दा हामी यसलाई अरु ताराहरुभन्दा धेरै ठूलो देख्छौ...